Idle Creepy Park Inc. – Kubiridzira&Kugura – Android Cheats Matipi
Na Editor | Gunyana 30, 2021
Usatye zvikara 😱! Tanga bhizinesi rako pachako rinotyisa!
Iwe wakashinga zvakakwana kupinda mupaki yekushanya izere nezvikara zvinotyisa 🤔?
Idle Creepy Park Inc. chiitiko chinotyisa uye chinonakidza kune vese vatambi vasina basa🔥!
Kuongorora haunted horror imba ine anotyisa monsters zvirokwazvo hausi mutambo wemunhu wese😮.
Iwe unofanirwa kuhaya maneja akashinga kuti akubatsire kumhanya iyi paki. Kunyangwe kuita mari nekutyisidzira vanhu 👻 inonzwika senge chirongwa chikuru chebhizinesi uye chichiri chinotyisa 🤑!
Icho chichava chiitiko chinonakidza! Asi usati watanga, unofanira kunge wakagadzirira zvinhu ZVINOTYISA 😨! Semuridzi wepaki inotyisa iwe uchafanirwa kuhaya mamaneja kuti vazotarisira ese anotyisa monsters kuratidzwa..
Hire mamaneja kuchengetedza kurongeka kwevanhu mukati. Ivo vanogadzirisa 🔧 yakaputsika monster kuratidzwa uye kuchenesa 🧹 nzvimbo dzese dzinotyisa asi mamaneja anomiririra bhizinesi rako rinotyisa risina basa kune vatengi..
Ipa vaenzi vako chiitiko chinonakidza kwazvo. Ita kuti vanzwe kutya asi kugutsikana😆! Kuvandudza paki yako nemamonsters matsva uye anotyisa! Usakanganwa nezve matumba ematikiti🎟️, food stands (zvihwitsi🍭!) nemitambo yakasiyana-siyana🕹️yevatengi vako – unogona kukwidziridza zvinenge zvese kuti uchengetedze bhizinesi rako risina basa riri mumamiriro akanaka! Ramba uchitarisa nhamba dzako! Mibairo yemari 🧾, kutengeswa kwechigadzirwa 💰, maneja anoshanda uye kugutsikana kwevatengi ✔️ inofanirwa kuve yako yekutanga pamberi!
● Inotyisa paki isina basa yezvitsva zvinokwezva! Matani emamonsters anotyisa 🤡 uye basa rakawanda rekuita!
● zvisikwa zvinotyisa! Iine vampires🧛, mummy🤕, Pirates🏴‍☠️, zvikara nezvimwe zvakawanda.
● ZVINYORE kutamba, zvakaoma kugona! Asi vatungamiri vachakubatsira! Wagadzirira here😱? IYE MAHARA kutamba!
● NADZWA nechiitiko ichi! Detailed rooms, inotyisa mamiriro uye anovhiringidza mavara ari musana-anotonhorera asi zvakare anonakidza nenzira yakanaka!
● KUNADZWA kwemutambo usingashandi! Tora mari 💲 uye ukure bhizinesi rako nekukurumidza sezvaunokwanisa!
Usatya kubudirira uye ramba uchibaya 👍
← Midsomer Mhondi: Mashoko, Mhosva & Mystery Cheats&Kugura Humambo Defender TD: Shongwe Dziviriro Strategy Game TD Cheats&Kugura →